Egwuregwu dainosoo nke Google: otu esi egwu ya n'ịntanetị, na ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ PC | Akụkọ akụrụngwa
Egwuregwu Dinosaur Google
Ignacio Sala | | Nkuzi, Videogames
O doro anya na unu niile, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọtụtụ n’ime unu, nwere smartphone ụfọdụ egwuregwu ndị ọzọ n'ihi na mgbe a manyere gị ichere maka minit ole na ole, mgbe ị na-ebu ụgbọ njem ọha, mgbe ị na-aga mposi ...
Ka oge na-aga, ọ ga-abụ na ike gwụrụ gị egwuregwu ahụ wee chọọ ụzọ ọzọ. Ma ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, n'ihi na ịchọrọ ka batrị nke ekwentị gị dịrị ogologo oge na-enweghị ịkwụsị ịkpọ egwu, ịnwere ike iji ya google dinosaur egwuregwu, egwuregwu nke gunyere na ihe nchọgharị Chrome.
Egwuregwu dinosaur nke Google malitere dị ka ụzọ na-atọ ọchị maka ihe nchọgharị Chrome iji gwa anyị na anyị enweghị njikọ internetntanetị, dị ka ọ dị n'oge dinosaur, mana ewere ya na oke. Dinosaur ahụ bụ egwuregwu, egwuregwu dị mfe anyị na-etinye onwe anyị na akpụkpọ ụkwụ nke dinosaur na anyị ga-awụli elu n'ihe mgbochi, na cactus na mbụ, mana ka anyị na-aga n'ihu, na mgbakwunye na mgbede anyị na-ahụkwa pterodactyls na elu dị iche iche, yabụ oge ụfọdụ anyị ga-awụlikwa elu iji zere ha ma ọ bụ guzosie ike na ala, dịka anyị nwere ike lee na GIF n'elu.
M na-ekwu ndị nwere ọganihu karịa, n'ihi na na mbụ egwuregwu nko, na ọtụtụ, n'ihi na ya siri ike, ebe ọ bụ na dị ka ị na-enwe ọganihu, ọsọ dinosaur na-aba ụba nke ga-amanye anyị ịgbakọ na oke nkenke mgbe anyị malitere ime nmali ka anyị ghara ịdaba na mgbochi.
T-Rex, dika akpọrọ egwuregwu a, dị ọ bụghị naanị na nyiwe mkpanaka nke Google Chrome, mana ọ dịkwa na nsụgharị nke ihe nchọgharị Google maka desktọọpụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na a na-egosi egwuregwu a kpọmkwem na nke anyị mgbe anyị na-enweghị njikọ Internetntanetị, anyị ekwesịghị ịhapụ ụwa kpamkpam iji nwee ike igwu ya.
1 Aghụghọ iji kwalite dị ka o kwere omume na T-Rex
2 Etu esi egwu egwuregwu dinosaur na gam akporo
3 Etu esi egwu egwuregwu dinosaur na iPhone / iPad / iPod touch
4 Etu esi egwu egwuregwu dinosaur na PC / Mac
Aghụghọ iji kwalite dị ka o kwere omume na T-Rex
Ọ bụrụ na echiche anyị bụ iji ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-egwu egwu, anyị ga-eburu n'uche na anyị enweghị aghụghọ ọ bụla anyị nwere, yabụ ga-adabere na nka anyị mgbe na-agbakọ mgbe anyị ga-eme ka o kwekọọ.
Na nsụgharị mobile na nke desktọọpụ, ike ịwụ elu ga-adabere na oge anyị pịa igodo ahụ, yabụ ọ bụrụ na anyị pịa ma jide igodo oghere, ga-awụlikwa elu ruo ogologo oge na ọ bụrụ na anyị pịa otu oge ngwa ngwa.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị gwuo na kọmputa, ihe dị mfe karịa, ebe anyị nwere ike iji Alt to kwusi egwuregwu ahụ nwa oge. Anyị nwekwara ike mee ka ọsọ dinosaur dị ngwa site na ịpị akụ dị ala.
Etu esi egwu egwuregwu dinosaur na gam akporo
Iji kpọọ na gam akporo ekwentị anyị, ụzọ kachasị ọsọ ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịwụnye ngwa ọ bụla iji mee ya, bụ imebi njikọ data na njikọ WiFi, na-enyere ọnọdụ ụgbọelu aka.
Ozugbo anyị gbanyuru njikọ abụọ ahụ, anyị ga-emeghe ihe nchọgharị Chrome ma mepee taabụ ọhụrụ, taabụ ga-egosi anyị dinosaur ozugbo, nke anyị ga-pịa ka anyị wee nwee ike ịnụ ụtọ T-Rex na-enyere ya aka ịgbanahụ cacti ahụ nọ n'ụzọ, dị ka Heidi dị n'ugwu Switzerland.
Mana ọ bụrụ na anyị achọghị ịkwụsị kpamkpam, anyị nwere ike iwunye ngwa Dino T-Rex na ngwaọrụ anyị, egwuregwu efu nke di na Google Play Store, site na njikọ na-esote na nke Google enyeghị ikike ịghọta maka uru, ebe ọ na-egosi anyị mgbasa ozi iji nwee ike igwu ya. Isi ihe dị iche na ụdị a na-enye anyị bụ na ọ dị na ihuenyo zuru oke na jumps dị nwayọ nwayọ.
Etu esi egwu egwuregwu dinosaur na iPhone / iPad / iPod touch
Dị ka m kwuru, T-Rex dị na nsụgharị niile nke Chrome maka nyiwe ebe ọ dị, yabụ na anyị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch anyị ga-enwe ike igwu egwu site na ịgbalite ọnọdụ ụgbọ elu nke ngwaọrụ anyị na ịnweta a ihe nchọgharị ọhụrụ ma ọ bụ tinyeghachi nke mepere n'oge ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị nke ọgbara ọhụrụ, yana agba yana anụmanụ ndị ọzọ, Steve - Jumping dainosoo n'ihi na iOS bụ egwuregwu ị na-achọ, egwuregwu nke arụnyere na ebe ngosi ahụ na anyị na-enwekarị aka n'ụzọ dị oke ọsọ karịa ịchọ ngwa na rata.
Etu esi egwu egwuregwu dinosaur na PC / Mac
Mana ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ ime bụ ịnụ ụtọ T-Rex nke ọma n'ụlọ anyị ma ọ bụ n'ọfịs anyị ịkwụpụ, anyị nwere ike iji peeji a n'ịntanetị, Na peeji nke ebe egwuregwu dị na-enweghị ịkwụsị njikọta akụrụngwa anyị nke njikọ Internetntanetị. Ibe weebụ a ga-emeghe igosi egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na anyị ejiri ihe nchọgharị Chrome.
Agbanyeghị, anyị nwere weebụsaịtị anyị a akpọrọ Onye na-agba ọsọ T-Rex. Versionsdị nsụgharị abụọ ahụ kwesịrị ntụkwasị obi na egwuregwu mbụ na Chrome, anyị nwere ike ịsị na ha bụ otu ụdị ahụ, mana n'adịghị ka weebụsaịtị gara aga, nke a na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị ndị ọzọ.
Anyị nwekwara nwa afọ nhọrọ inwe ike ịnweta T-Rex na-enweghị ike ịnweta ibe weebụ ọ bụla site na iji kọmputa ede iwu na-esonụ na ogwe ọchụchọ na-enweghị nkwuputa "chrome: // dino /" na ịpị oghere ohere iji malite egwuregwu ahụ. Anyị nwekwara ike ide iwu na-esonụ na-enweghị nkwuputa "chrome: // network-error / -106" iji nweta egwuregwu ahụ.
Na wentanetị anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ nke ihe nchọgharị karịrị Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera na ndị ọzọ, ebe enwere ọtụtụ ihe nchọgharị ndị ọzọ na ahịa n'ezie ha bụ ndụdụ nke chrome, ya mere na nke a, o yikarịrị, ọ naghị arụ ọrụ ma ọlị, na site na itinye koodu ndị anyị gosipụtara n'elu na adreesị mmanya ị nwere ohere ịnweta T-Rex.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Egwuregwu Dinosaur Google
Haven't gwabeghịdị ya, iberibe Nke mbụ ọ na-agbanwe n'abalị, mgbe ahụ pterodactyls na-amalite ịpụta na elu dị iche iche. Nke ahụ bụ ihe dịka 600 isi.
Ọnwụ ndị kachasị ọhụrụ na HTC bụ onye isi ala ya, Chialin Chang
Onye na-egwuputa ihe na-egbochi ịchọ ndụ ndụ extraterrestrial